Asambodo - AnHui Jin Bai He Medical Apparatus Co., Ltd.
"Anyị dị njikere ibi ndụ ahụike."
—— Onye isi ụlọ ọrụ, Shaowei Wang
▍ Iguzogide coronavirus, anyị mere mgbanwe ngwa ngwa na usoro mmepụta ya. Achọpụtara ebe nrụpụta mkpuchi ihe na-erughị izu 3 erite uru site na ahụmịhe ngwaọrụ ahụike anyị.
▍ Ugbu a, anyị nwere a ọkọnọ ike nke 3 nde PC / ụbọchị na ruru eru site FDA (Dusk Mask) & OA (Medical nkpuchi). Anyị bụ mgbe njikere inye asambodo na parterners, na-atụ anya na-ekwenyere ndị niile teamys chọrọ masks na ndị ọzọ ọgwụ ngwa.
▍ Ihe ngwugwu ngwugwu
FDA Mba: 2002: 16US535558
Ndepụta Mba.: D374833 (Usoro: LYU)
Aha: Disposable Medical nkpuchi
CE Site SUNGO
Ntughari No.: 20200627
Nyocha ụlọ ọrụ:
Oche nkwagharị na skuuta:
FDA, OA, EN12184, ISO7176
▍ Ihe ngwugwu nkpuchi
▍ Ihe nkpuchi ọ bụla ga - ejide n'aka na ị ga - agbaji n'oge njem. Nkọwa ngwugwu egosiri dị ka n'okpuru (ma nkwakọ ngwaahịa n'ime na mpụga). I nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị iji nwetakwuo ihe ọmụma.
Bụrụ ndị ụka anyị, Iji mepụta ọfụma ka mma.
—- Na Rehacare, 2019
JBH Medical, Hapụ Ndụ Gị
ihe nkpuchi ihu, ihe nkpuchi nwere ike wepu, ndozi bed maka ndị ọrịa, hydraulic ndidi lifter, ọgwụ na-edozi akwa, onye na-eku ume ọkụ eletrik,
ọgwụ na-edozi akwa, ihe nkpuchi ihu, ihe nkpuchi nwere ike wepu, onye na-eku ume ọkụ eletrik, hydraulic ndidi lifter, ndozi bed maka ndị ọrịa,